မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လှိုင်းအမြင့် ၅၆ ပေ ရှိမည့် အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်း PHAILIN « MMWeather Information BLOG
« စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး PHAILIN-02B အိန္ဒိယကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ အဆင့်-၄ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း PHAILIN-02B LATEST TRACK »
မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လှိုင်းအမြင့် ၅၆ ပေ ရှိမည့် အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်း PHAILIN
အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာပြီး မူလခန့်မှန်းကြောင်းအထက်သို့ ၁၁ မိုင်ခန့် ရွေ့လျားကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သြရိသပြည်နယ် Brahmapur မြို့အပေါ်တည့်တည့်မှ ဖြတ်ကျော်ကာ ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လျှင် မုန်တိုင်း ဒီလှိုင်းအမြင့် ၅၆ ပေရှိမည်ဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းအားအပြင်းဆုံး စက်ဝန်း အချင်းမိုင် ၈၃ မိုင်ခန့် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆုံးရရှိသည့် JTWC warning – 11 တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီအချိန်တွင် ကုန်းတွင်းသို့ စတင် ဖြတ်ကျော်ချိန်၌ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁၆၆ မိုင်မှ မိုင် ၂ဝဝ အထိ ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ခန့်မှန်းထားရာ အင်အား အပြင်းဆုံး စူပါဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းတစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ မုန်တိုင်း၏ လက်ရှိ အရွယ်အစား အချင်း ၂၁၅ မိုင်ခန့် ရှိနေပြီး၊ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရနိုင်မည့် ကမ်းရိုးတန်း အရှည် မိုင် ၄ဝဝ ကျော်ရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
11/12Z (TROPICAL CYCLONE 02B (PHAILIN) WARNING NR 011- 140 knots)
TROPICAL CYCLONE 02B (PHAILIN) WARNING #11
111200Z POSIT: NEAR 16.7N 87.7E
MOVING 310 DEGREES TRUE AT 09 KNOTS (ရွေ့လျားမှု ဦတည်ရာ ၃၁ဝ ဒီဂရီ (အနောက်မြောက်ဘက်)သို့ တစ်နာရီ ၁ဝ မိုင်နှုန်းကျော်ခန့်)
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT: 56 FEET (မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် မုန်တိုင်း ဒီလှိုင်းအမြင့် ၅၆ ပေ)
11/12Z, WINDS 140 KTS, GUSTS TO 170 KTS (တစ်နာရီ ၁၆၁ မိုင်မှ ၁၉၆ မိုင်နှုန်း)
12/00Z, WINDS 145 KTS, GUSTS TO 175 KTS (တစ်နာရီ ၁၆၆ မိုင်မှ ၂ဝ၁ မိုင်နှုန်း)
12/12Z, WINDS 130 KTS, GUSTS TO 160 KTS (တစ်နာရီ ၁၅ဝ မိုင်မှ ၁၈၄ မိုင်နှုန်း)
13/00Z, WINDS 100 KTS, GUSTS TO 125 KTS (တစ်နာရီ ၁၁၅ မိုင်မှ ၁၄၄ မိုင်နှုန်း)
13/12Z, WINDS 065 KTS, GUSTS TO 080 KTS (တစ်နာရီ ၇၅ မိုင်မှ ၉၂ မိုင်နှုန်း)
14/12Z, WINDS 030 KTS, GUSTS TO 040 KTS (တစ်နာရီ ၃၅ မိုင်မှ ၄၆ မိုင်နှုန်း)
111500Z POSITION NEAR 17.0N 87.4E.
TROPICAL CYCLONE 02B (PHAILIN), LOCATED APPROXIMATELY 356 NM SOUTH OF KOLKATA, INDIA, HAS TRACKED NORTHWESTWARD AT 09 KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. ANIMATED MULTISPECTRAL SATELLITE
IMAGERY (MSI) DEPICTS AN INTENSE CYCLONE WITH A SLIGHTLY-CONSOLIDATED SYMMETRIC EYE, APPROXIMATELY9NM IN DIAMETER, WITH MULTIPLE DEEP CONVECTIVE BANDS SPIRALING OUT FROM THE CIRCULATION
THE 11/0000Z-11/1345Z MORPHED INTEGRATED MICROWAVE IMAGERY AT CIMSS (MIMIC) ANIMATION PRODUCT CLEARLY SHOWS THE SYSTEM UNDERWENT AN EYEWALL REPLACEMENT CYCLE (ERC) OVER THE PAST 12 HOURS.
THE NEWLY FORMED EYEWALL HAS CONSOLIDATED AND ALLOWED THE SYSTEM TO SLIGHTLY INTENSIFY. THE INITIAL POSITION IS BASED ON THE EYE FEATURE IN THE MSI ANIMATION WITH HIGH CONFIDENCE. THE INITIAL INTENSITY IS BASED ON THE PGTW DVORAK INTENSITY ESTIMATE OF 140 KNOTS.
UPPER LEVEL ANALYSIS INDICATES THE SYSTEM IS APPROXIMATELY FOUR DEGREES SOUTH OF THE SUBTROPICAL RIDGE (STR) AXIS IN AN AREA OF LOW (05 TO 10 KNOT) VERTICAL WIND SHEAR AND EXCELLENT RADIAL OUTFLOW.
TC PHAILIN IS TRACKING ALONG THE SOUTHWESTERN PERIPHERY OF THE DEEP-LAYERED STR TO THE NORTHEAST. TC 02B IS FORECAST TO CONTINUE TRACKING NORTHWEST ACROSS THE REMAINDER OF THE BAY OF BENGAL AND MAKE LANDFALL NORTHEAST OF VISAKHAPATNAM, INDIA, JUST AFTER TAU 24.
THE SYSTEM IS EXPECTED TO SLIGHTLY INTENSIFY TO A PEAK OF 145 KNOTS OVER THE NEXT 12 HOURS AS FAVORABLE CONDITIONS PERSIST. AFTER LANDFALL, TC PHAILIN WILL RAPIDLY ERODE AS IT TRACKS ACROSS THE RUGGED TERRAIN OF NORTHERN INDIA, DISSIPATING BY TAU 72.
THE AVAILABLE NUMERIC TRACK GUIDANCE IS IN TIGHT AGREEMENT, LENDING HIGH CONFIDENCE TO THE JTWC TRACK FORECAST THAT IS LAID CLOSE TO MULTI-MODEL CONSENSUS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 111200Z IS 56 FEET.
MODEL-FORECAST, မုန်တိုင်းသတင်း, မှတ်တမ်း 02B, 90W, PHAILIN, စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် « စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး PHAILIN-02B အိန္ဒိယကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ အဆင့်-၄ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း PHAILIN-02B LATEST TRACK »
1 comment to မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လှိုင်းအမြင့် ၅၆ ပေ ရှိမည့် အဆင့်-၅ စူပါဆိုင်ကလုန်း PHAILIN
Log in to Reply	အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၂း၃ဝ နာရီ water vapor image တွင် မုန်တိုင်းအဖျားပိုင်း တိမ်တိုက်များ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းနှင့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများထိအောင် ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိနေပုံကို တွေ့ရပါမည်။
« စူပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး PHAILIN-02B အိန္ဒိယကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ အဆင့်-၄ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း PHAILIN-02B LATEST TRACK »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum